Tod na akpụkpọ ụkwụ - moccasins, sneakers, loffers, akpụkpọ ụkwụ, sneakers, akpụkpọ ụkwụ ballet, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, esi mara ọdịiche dị?
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ - 36 foto nke ụdị ndị kachasị mma n'ụwa
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Tod bụ ụdị ndị a ma ama nke Italian. A na-ebute ha n'egwuregwu na egwu dị iche iche, n'ihi ya, ndị inyom ga-enwe ike ịhọrọ ngwaahịa ndị kachasị mma na ya.
Akpụkpọ ụkwụ Tod
Ọtụtụ ndị na-anọchite anya mmekọahụ na-enwe mmasị na ụdị ika bụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ Tod? Ewubere aha ahia Ịtali n'afọ 1940, Filippo Della Valle kere ya. Ngwa ụlọ ọrụ a jikọtara ya na moccasins, nke otu oge bụ kaadị azụmahịa ya. A tọhapụrụ ha n'afọ 1970, ihe dị iche iche ha nwere bụ ihe ngwọta nke rubber na ọkara 133 nke eji arụ ọrụ. N'ikpeazụ, amalitere ịmepụta ụdị ihe eji eme ya ma mee ya maka mgbede.
Akpụkpọ ụkwụ Tod - olee otú ị ga-esi amata ọdịiche dị adị?
Mods ndị na-eme ihe dị otú a nkecha nnweta dị ka Tod si akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ọ na-atụ aro na-akwụsi nnọọ uche ya nhọrọ iji nweta ngwaahịa mbụ na ghara na-agba ọsọ n'ime adịgboroja. A na-atụ aro ka ị ṅaa ntị n'ihe ndị na-esonụ:
ọnụnọ nke nkwakọ ngwaahịa mbụ;
Aha nke logo ahụ dị n'ime ime ụlọ;
ihe nkedo kwesiri inwe udi nke ahu, ihe ntughari bu kwa, enweghi ike ijide eri ndia;
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ.
ụdị nke ụdị mbụ ahụ ga-abụrịrị ihe kwekọrọ na ya;
N'oge na-adịbeghị anya, a na-emepụta ego nyocha site na enyemaka nke mmemme pụrụ iche maka smartphones na-enyocha koodu nchekwa.
Akpụkpọ ụkwụ Ụmụ Tod
A na-enye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Tod. Ọ nwere ụdị ya pụrụ iche, nke egosiri na ihe ndị a:
doro anya na laconism nke edoghi, ụdị dị iche iche na njide na ịdị mma, ọbụna ma ọ bụrụ na ụdị ihe niile eji achọ ka eji ha emepụta;
dị ka ihe mma nke ụdị ụfọdụ eji ejiji, ọ bụ akpụkpọ anụ ka a ga-etinye ya na ngwaahịa ahụ dị oke ọnụ. N'otu oge ahụ, a na-emepụta atụmatụ ahụ n'ụzọ doro anya na ọ pụtaghị na a ga-eme ka ọ ghara ịnwụ;
dị ka ihe maka ịmepụta akpụkpọ anụ ma ọ bụ edozi kachasị mma;
ụdị ụdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche, ọ nwere ike ịbụ àgwà ndị nwere ọgụgụ isi, dị ka nwa ma ọ bụ aja aja, agba aja aja, pastel agba . Bright na jupụtara ọnụ, dịka ọmụmaatụ, oroma, aquamarine, utu.
Otu n'ime mgbanwe dị iche iche a na-echefu echefu bụ moccasins Tod. Kemgbe mmalite nke mmepụta ha, ụlọ ọrụ ahụ enwetawo otuto n'ụwa nile, ebe ọ bụ na ha na-emepụta mmepe ahụ, nke mere ka ngwaahịa ahụ dị mma ma dị mma iji yie. Otu n'ime àgwà ha bụ ihe ndị a:
Ọnụnọ nke naanị ahụ, nke zuru oke na-agbada, na-enye oke njem mgbe ọ na-eje ije;
A na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Tod, n'ihi na nke a, a na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu buru ibu, nke na-enye nkwado;
n'oge na-adịbeghị anya maka akara ngosi a na-eji ejiji agba agba na mmepụta nke moccasins. Ọ nwere ike ịbụ olu dị nro, dị ka lavender, ma ọ bụ na-egbukepụ egbukepụ, na-adọrọ mmasị, dị ka uhie ma ọ bụ oroma. O nwekwara ike ijikọta dị iche iche shades;
a pụrụ iji ụda dị egwu nke otu ihe ahụ dị ka ngwaahịa, dị ka akpụkpọ anụ ma ọ bụ edozi anya, nwere ike ịchọta ya. O nwere ike idaba na agba ya na elu ma ọ bụ mee ọdịiche na ya.
Ndị sneakers Tod
Otu n'ime umuaka bu umuaka Tod. A na-eji àgwà ndị dị iche iche mara ha:
a na-edebe ha n'ụdị mara mma, nke na-enye ha ohere iji ha mee ihe ọ bụghị nanị maka egwuregwu, kamakwa maka ịmepụta ihe ngosi dị egwu na ụdị nke kazhual . A pụrụ ijikọta snịịka ọ bụghị naanị na uwe egwuregwu ma ọ bụ jeans, kamakwa na uwe ejiji ma ọ bụ uwe mwụda;
E nwere ụdị ihe atụ ndị nwere lacing, ma ọ bụ ngwaahịa ndị emere na ụzọ mbụ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike tinyekwuo ya site na ntinye ịba akwa na n'akụkụ, mgbe n'elu ahụ siri ike ma mechibido, ọ nwere ike ịgbakwunye ya na akpụkpọ anụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ;
Uche nwere ike ijikọta na agba ya na elu ma ọ bụ mee ka ọdịiche dị iche. A na-ahụkarị na-acha ọcha ọcha na agba ojii, na ndị ọzọ na Nchikota na-etịbe;
ụmụ agbọghọ ndị na-ahọrọ ụta na-ejide azụ nwere ike ịhọrọ ndị na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke, nke e ji ọla edo ma ọ bụ ndo nke edo.
Maka ịgagharị kwa ụbọchị ma ọ bụ na-aga n'ọfịs, ụmụ nwanyị na-ahụ maka Tod bụ ngwọta zuru oke. A na-akwanyere ha ùgwù site n'àgwà ndị dị otú ahụ:
na imepụta nlebara anya dị ukwuu na-akwụ ụgwọ dị elu ma dị mma, ndị na-ahụ maka ọnụ na-adị oke ọnụ na ndị na-enweghị ntụpọ;
Ụdị na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị isi na-anọgide na-aga n'ihu;
gbasaa ihe ịchọ mma na akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke na-adaba na agba na elu ma ọ bụ ọdịiche;
e nwere ihe ndozi ndị dị otú ahụ dị ka oghere dị elu nke akpụkpọ anụ dị mkpa, dị iche na agba;
ezigbo ọnụ ọnụ, nke dị n'elu ngwaahịa ahụ.
N'okpuru dị iche iche nke ụmụ nwanyị akpụkpọ ụkwụ Tod. Otu nwere ike ịdebanye ọdịiche dị iche iche nke ụdị ha:
Ụgbọ mmiri ndị mara mma nke na-anọ n'èzí na mmetụta nke ejiji;
akpụkpọ ụkwụ mechiri emechi, ha nwere ike ịnweta larịị ma ọ bụ hazie dị ka mkpuchi;
akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịgbakwunye ụkwụ ala, obosara, ikiri ụkwụ;
nhọrọ ọzọ bụ nnukwu ikiri ụkwụ, ọ nwere ike inwe ọdịdị dị nhata ma ọ bụ dịkwuo oke n'akụkụ elu ma gbasaa ala;
A na-eji akpụkpọ anụ ma ọ bụ metal achọ mma akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ Tod, nke dị n'ihu ma ọ bụ n'akụkụ.
Ulo elu nke Tod
Ngwọta zuru oke maka oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị bụ akpụkpọ ụkwụ bọọlụ Tod. N'ime nkọwa ha, anyị nwere ike ịhọrọ ihe ndị a:
Ebumnuche nke ìhè na-achakarị, ma e nwere ma ọ bụ oji na-egbuke egbuke;
maka mmepụta nke akpụkpọ anụ ma ọ bụ na-edozi;
a pụrụ iji ụdị akụkụ ọla edo chọọ ụdị ụfọdụ, nke dị n'akụkụ ihu;
enwere ike inwe nchikota agba, dịka ọmụmaatụ, elu ọcha jikọtara ya na obere nwa.
Egwuregwu ndị ọzọ na-ewu ewu bụ ndị sneakers Tod. Ị nwere ike ịlele atụmatụ ha:
Ọnụnọ nke okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka ikpo okwu;
ọtụtụ agba, sneakers nwere ike ịbụ ọchịchịrị ma ọ bụ ìhè, karịsịa romantic pastel colors;
Uche nwere ike ijikọta na agba na elu ma ọ bụ mee ka ọdịiche dị iche;
enwere ike itinye ntinye site na ihe ọzọ, a na-enye ha na agba ma ọ bụ na-eṅomi akpụkpọ anụ.
Tod akpụkpọ ụkwụ
Ahịa ahịa na-adabere n'ọnọdụ dị mma na nkasi obi, na-emepụta ọ bụghị nanị n'oge okpomọkụ, kamakwa ụdị oyi, dịka ọmụmaatụ, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Tod. A na-eji àgwà ndị dị iche iche mara ha:
eji dị ka ihe maka akpụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ edozi kacha mma;
otu okpokoro ma ọ bụ n'elu ikpo okwu nwere ike ịdị, ọ bụkwa ebe dị elu dị elu;
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịnweta akpụkpọ ụkwụ dịgasị iche iche, site na nke dị mkpirikpi, nke ọkara dị elu , nke dị elu, na-eru ikpere;
A na-anabata ihe ịchọ mma ndị dị ka buckles, nke a na-ejikwa ígwè na akpụkpọ anụ ma ọ bụ ihe eji eme ihe. Ha nwere ike ịnọ na elu ma ọ bụ na ala nke osisi.
Maka oge mgbụsị akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ ụmụ Tod ga-abụ ngwọta dị oké mkpa. E nwere ọdịiche dị iche iche nke atụmatụ ha:
nwere ala dị ala ma ọ bụ elu;
Dịka ntanye, enwere ike ịchọta agwọ, ihe ọzọ bụ ntinye na-agbanwe na n'akụkụ, nke na-enyere aka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ;
enwere ike ịchọta larịị, karịsịa n'ụzọ dị irè nke a na-ele anya n'elu ikiri ụkwụ na n'elu elu.
Maka oge na-ekpo ọkụ, akpụkpọ ụkwụ Tod ga-adị oké mkpa. Akpụkpọ ụkwụ ndị a ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, a na-enwe mmasị na ọdịiche dịgasị iche, n'etiti nke ị nwere ike ịlele ihe ndị a:
nwere ike ịnwe n'elu ikpo okwu, ọkpụkpụ ma ọ bụ ebe a na-ekpo ọkụ;
ihe a na-emeghe, enwere ike ịme ya n'ụdị dịgasị iche iche ma ọ bụ gbakwunye ya dị ka nkedo;
Ụdọ ahụ nwere ike ịdị n'otu ma ọ bụ jikọrọ ya.
Waistcoat maka ụmụ agbọghọ
Ndị na-akpụ ụkwụ "Nike"
Akpụkpọ anụ atụrụ nke ụmụ nwanyị
Uwe na ejiji Grik - nkọwa nke oge ochie ejiji
Ihe Ntucha Ụmụaka Cashmere
Ememe Krismas na Europe 2015-2016
Uwe na-emeghe - ụdị kachasị mma na ejiji eji eme ihe n'oge niile
Ọcha acha ọcha
Ejiji na mkpirikpi - 24 foto nke kachasị mma maka ọ bụla uto
Kedu ka esi mee pony a plasticine?
42 gifki, nke ga-eme ka ị na-amụmụ ọnụ ọchị
Archetype - ihe atụ nke Jung archetypes na otu esi achọta archetype gị?
Oke na ulo - esi tufuo?
Gini mere anyi ji eche n 'ihi nri?
Knife maka kabeeji
Gigi Hadid na Kendall Jenner
Goldfish - ọdịnaya n'ime akwarium
Uwe uwe agbamakwụkwọ - Ụdị 2015
Gịnị ma ọ bụrụ na di adawo n'ịhụnanya?
Ime afọ mgbe a gụchara ụmụ ọgwụ
Kedu otu esi amalite mkparịta ụka na nwoke?
Esi ofe na ihe a na-ese siga na multivark
Oge Ntorobịa 2014